उदीयमान युवा नेता अधिकारीको अवसान
शरच्चन्द्र भण्डारी/प्रकाश सिलवाल : काठमाडौँ, १५ फागुन । ताप्लेजुङमा आज भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा दिवङ्गत हुनुभएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)
यी हुन हेलिकप्टर दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरु (नामसहित)
काठमाडौं, १५ फागुन । ताप्लेजुङमा भएको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीसहित ७ जनाको निधन भएको छ । AS350 हेलिकोप्टर दुर्घट्ना भएको हो । १. संस्कृति पर्यटन
हेलिकप्टर दुर्घट्नामा परी मन्त्री अधिकारीसहित ७ जनाको निधन
काठमाडौं, १५ फागुन । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी सवार हेलिकप्टर ताप्लेजुङमा दुर्घटना हुँदा मन्त्री अधिकारीसहित ७ जनाकै निधन भएको छ । ताप्लेजुङस्थित पाथीभरा मन्दिर नजिकैको भिरमा
एयर डाइनेस्टीको हेलिकोप्टर दुर्घट्ना : मन्त्री अधिकारसहित ७ जना सवार भएको पुष्टि (नामसहित)
काठमाडौं, १५ फागुन । पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित ७ जना सवार भएको एयर डाइनेस्टीको हेलिकोप्टर ताप्लेजुङको दाह«ेढुंगामा दुर्घटना भएको छ । उक्त हेलिकप्टर पाइलट प्रभाकर केसीले उडाएका थिए । हेलिकोप्टरमा मन्त्री
मन्त्री अधिकारी सवार हेलिकप्टर दाह्रेढुंगामा दुर्घटना
काठमाडौं, १५ फागुन । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित ६ जना सवार हेलिकोप्टर फुङलिङ नगरपालिकाको दाह्रेढुंगामा दुर्घटना भएको आशंका गरिएको छ । हेलिकप्टरमा मन्त्री अधिकारसहित यति एयरलाइन्सका अध्यक्ष
पाकिस्तानले दियो भारतलाई चेतावनी
इस्लामावाद, फागुन १५ । भारतले पाकिस्तानी भूमिमा बम खसालेर तीन सयभन्दा बढी विद्रोहीको हत्या गरेको दाबी गरेपछि आक्रोसित पाकिस्तानले भारतलाई उचित जवाफ दिने चेतावनी दिएको छ । भारतले गरेको दाबी
एनसेल बम काण्ड : विप्लव समूहका नेता पक्राउ
काठमाडौं, १४ फागुन । प्रहरीले ललितपुरको नख्खुमा भएको बम विष्फोटमा संलग्न भएको आरोपमा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहका नेता सूर्य भुजेललाई पक्राउ गरेको छ । नेपाल प्रहरीको विशेष ब्यूरो र महागनरीय
कार्यदल विघटनपछि ओली-प्रचण्डलाई योगेश भट्टराईले बुझाए प्रतिवेदन
काठमाडौं, १२ फागुन । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को शक्तिशाली सचिवालय बैठकले पार्टी एकता टुँगो लगाउन गठन गरेका ९ सदस्यीय कार्यदल विघट्न गरेको छ । तर, कार्यदलका सदस्य
कांग्रेसको विधान पारित, पौडेलको विरोध
काठमाडौं, १२ फागुन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको आज बसेको बैठकले महासमिति बैठकले केन्द्रिय समितिमा पठाएको नयाँ विधान पारित गरेको छ। आइतबार बसेको बैठकले नयाँ विधानलाई बहुमतबाट पारित गरेको
मन्त्रीद्धय खनाल र अर्यालमाथि ‘एक्शन’ लिने तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली
फागुन १२, काठमाण्डौ । मन्त्रीहरुले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै मुख खोल्नुभएको छ । मन्त्रीहरु नै परिवर्तन गर्नेसम्मका चर्चा चलिरहेका बेला ओलीले दुईवटा
‘सरकारले नेपालको सुरक्षा व्यवस्थाबारे पाहुनालाई विश्वस्त बनाउन सकेन’ काठमाडौं, १६ भदौ । पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सह–महामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विम्स्टेक राष्ट्रहरुले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको बताएका छन् ।
कार्यकारी राष्ट्रपति अहिलेको कार्यसूची होइनः प्रचण्ड
चितवन, २९ जेठ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बजेट मत तान्ने खालको नभएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई विस्तारै सन्तुलनमा ल्याउने खालको भएको बताउनुभएको छ । प्रेस चौतारी